Phcoker Professional Fekitori YeMishonga Inopindirana Uye APIs
Enterprise inoshandira inoshanda mushonga mishonga yepakati (APIs)
ISO9001: 2000 mitemo uye kutevedzana ne cGMP mitemo.
Zvinopfuura makore 20 makore emakambani emishonga ane ruzivo ane zvakakwana zvakabatsirana zvekambani.
Nezvinobudirira zvesayenzi uye zvigadzirwa zvemagetsi, shanduro ye Shangke inoshanda zvikuru uye inofadza.
Nhandare yedu yebasa rekutengeserana inopa rubatsiro rwakakwana rwezvesayenzi uye yesayenzi pane yakakwirira yevashandi panguva yakakodzera.
Zvigadzirwa zvedu zveCore
Palmitoylethanolamide (PEA) kuongorora Pane zvakataurwa kuti Kudya neDrug Administration yakatenderwa kuendesa fomu f ...
Wakafa wakatarisana nekukwegura here? Huye, mushonga unopesana nekukwegura hapana mubvunzo sarudzo yakatendeseka yekudzorera yako cloc cloc ...
Nei tichida Magnesium? Tisati tanyatsoongorora Magnesium L-Threonate nootropic yekuwedzera, ungangoda kunzwisisa avo ...
Galantamine Hydrobromide pfupisoGalantamine hydrobromide mushonga wekurapa unoshandiswa kurapa kuora mwoyo kwezvirwere zveAlzheimer ...
PRL-8-53 muchidimbu Hype yePRL-8-53 se psychoactive mushonga unoteedzera kumashure mukutanga kwema1970. Nikolaus Hansl, purofesa paC ...
Cycloastragenol Ongororo Cycloastragenol (CAG) inozivikanwawo sekuti T-65 ndeye yakasikwa tetracyclic triterpenoid yakawanikwa kubva kuAstr ...
Nicotinamide riboside (NR) uye nicotinamide riboside (Chloride) Nicotinamide riboside (NR) chloride chimiro chakakwenenzverwa che ...
Chii chinonzi Oxiracetam? Oxiracetam ndeimwe yekare nootropic inowedzera kubva kumhuri ye racetam. Yakanga iri yechitatu racetam com ...
Chii chinonzi 9-ME-BC? 9-Me-BC (9-Methyl-β-carboline) inozivikanwawo se9-MBC inoverengeka nootropic remubatanidzwa kubva kuβ-carboline boka. ...
Bhalisa kuti uwane ruzivo rwezvino pamusoro pekambani yedu.